အကယ်၍ “ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး”အင်အားစုက မျဉ်းနီကို ကျော်လွန်လာပါက တရုတ်နိုင်ငံနေဖြင့် ခိုင်မာသည့်နည်းလမ်းများ မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြား - Xinhua News Agency
ပေကျင်း ၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင့်ဖိန်က “ ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး” ကြိုးပမ်းမှုသည် “ ကျွန်ုပ်တို့အား ရန်စခြင်း ၊ ကျွန်တော်တို့လက်ကို တွန်းအားပေးခြင်း သို့မဟုတ် မျဉ်းနီကိုကျော်ဖြတ်ခြင်း” မှတ်ယူကာ ခွဲထွက်ရေးအင်အားစုများအား တရုတ်နိုင်ငံက ခိုင်မာသောသန္နိဌာန်ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။သမ္မတရှီသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန် နှင့် ဗီဒီယိုအွန်လိုင်းအစည်းအဝေးအတွင်း ထိုင်ဝမ်အရေးမေးခွန်းအပေါ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ မူဘောင်စည်းမျဉ်းရပ်တည်ချက်အား ပြောကြားရာတွင် အထက်ပါအတိုင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်ရေလက်ကြားဖြတ်ကျော် တင်းမာမှုများ လှိုင်းအသစ်ကို ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး အချို့သော ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်များသည် ၎င်းတို့၏ခွဲထွက်ရေးအာဂျင်တာအတွက် အမေရိကန်ထောက်ခံမှုကို မျှော်လင့်ကာ ထပ်ဖန်တလဲလဲ ကြိုးပမ်းခြင်း အပြင် အချို့သော အမေရိကန်များကလည်း တရုတ်နိုင်ငံအား ထိန်းချုပ်ရန် ထိုင်ဝမ်ကို အသုံးချရေး ရည်ရွယ်လုပ်ဆောင်မှုသည် တင်းမာမှုများဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားဟု မှတ်ယူကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
“ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ သိပ်ကိုအန္တရာယ်များပါတယ် ၊ မီးနဲ့ကစားနေတာနဲ့အတူတူပါပဲ” ဟုရှီက ပြောကြားခဲ့ပြီး “ မီးနဲ့ကစားသူကတော့ မီးလောင်ခံရမှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ နှင့် တရုတ်-အမေရိကန် ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ချက်သုံးရပ် သည် တရုတ်-အမေရိကန် ဆက်ဆံရေး၏ နိုင်ငံရေး အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ယင်းအပေါ် ယခင် အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးအဆက်ဆက်က ရှင်းလင်းသော ကတိကဝတ်များဖြင့် အားလုံးလိုက်နာပြုကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
ထိုင်ဝမ်အရေး၏ မှန်ကန်သည့်လက်ရှိအနေအထားနှင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒ၏အဓိကအကြောင်းအရာကို ရှီက အောက်ပါအချက်များဖြင့် မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းရှိပြီး ထိုင်ဝမ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ကြောင်း နှင့်
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည့် တရားဝင်အစိုးရဖြစ်ကြောင်း ရှီက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအလုံးစုံပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးသည် တရုတ်လူမျိုးသားသမီးများ အားလုံး၏ တူညီသည့်စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ကြောင်း ၊ “ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ရှည်သီးခံ၊ အဆုံးစွန်သော ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု ၊ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ နဲအတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးရဲ့ အကျိုးရလဒ်အတွက် အားထုတ်သွားမှာပါ ” ဟု ရှီက ဆိုသည်။
“ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရန်စတဲ့ ၊ ကျွန်တော်တို့လက်တွေကို တွန်းအားပေးတဲ့ ဒါမှမဟုတ် မျဉ်းနီကိုကျော်ဖြတ်တဲ့ ထိုင်ဝမ်ခွဲထွက်ရေး အင်အားစုတွေကို ကျွန်တော်တို့က ခိုင်မာတဲ့သန္နိဌာန်နဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” ဟု ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
Update: China will be compelled to take resolute measures should “Taiwan independence” forces cross red line: Xi
BEIJING, Nov. 16 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping said Tuesday that China will be compelled to take resolute measures, should the separatist forces for “Taiwan independence” “provoke us, force our hands or even cross the red line.”
Xi made the remarks while stating China’s principled position on the Taiwan question atavirtual meeting with U.S. President Joe Biden.
The true status quo of the Taiwan question and what lies at the heart of one China, Xi pointed out, are as follows: there is but one China in the world and Taiwan is part of China, and the Government of the People’s Republic of China is the sole legal government representing China.
Calling achieving China’s complete reunification an aspiration shared by all sons and daughters of the Chinese nation, Xi said, “We have patience and will strive for the prospect of peaceful reunification with utmost sincerity and efforts.”
“That said, should the separatist forces for ‘Taiwan independence’ provoke us, force our hands or even cross the red line, we will be compelled to take resolute measures,” Xi said.
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန် ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး